Doorasho Maanta ka dhacaysa Magaalada Xudur ee G/Bakool | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Doorasho Maanta ka dhacaysa Magaalada Xudur ee G/Bakool
Doorasho Maanta ka dhacaysa Magaalada Xudur ee G/Bakool
Doorashada Maamulka iyo Golaha deegaanka Degmada Xudur ee Xaruunta Gobolka Bakool ayaa lagu wadaa in ay maanta ka dhacdo godaha Magaaladaasi kaasoo ay dooran doonaan bulshada deegaanka.
Doorashada ayaa waxaa ka qeybgalaya Ma’suuliyiin ka tirsan Maamulka Koonfur galbeed Soomaaliya,xubno ka tirsan Wasaaradda Arrimaha gudaha xukumadda Federaalka Soomaaliya,Odayaasha iyo qeybaha kala duwan ee Degmada Xudur ee Gobolka Bakool.
Wariyaha Warbaahinta Qaranka Soomaaliya ee Gobolka Bakool Maxamed Xasan C/raxmaan ayaa soo sheegaya in Saaka ay socoto qaban qabada dooroshada Maamulka Degmada Xudur si weynna loo adkeeyay Amaanka Magaalada Xudur maadaama ay kasoo qeyb galayaan Ma’suuliyiin sar sare.
Maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa wada dhismaha iyo xoojinta Maamulada degmooyinka Gobolada Baay,Bakool iyo shabeelaha hoose oo dhamaan ka tirsan deegaanada hoos yimaada Maamulka koonfur galbeed Soomaaliya.
Previous articleMaamulka G/ hiiraan oo sheegay in ay ku guulaysteen qeybinta deeq gar gaar ah
Next articleNatiijada doorashada Liberia oo la shaacinayo